Fikarohana momba ny firaisana Ny firaisana amin'i Maria Pizza Guy Bryce Dudal avy amin'ny fampisehoana Ellen DeGeneres ary ny filoham-pinoan'i Los Angeles Gustavo Dudame - fikarohana momba ny vatana
Tolo-kevitra avy amin'ny: Mpanentana Reincarnation Research.com
Bryce Dudal ho fampianaran'i Louise Von Beethoven
Ny namako iray, izay nanaraka ny fikarohana nataoko tamin'ny fambolen-jatovo, dia nanintona ny sainiko ny zava-maneno nataon'ilay lehilahy mpivarotra pizza tanora antsoina hoe Bryce Dudal, izay nanolotra pizza ho an'ny fianakaviana izay manana piano lehibe malaza, rehefa avy nanao pizza fampisehoana ny fananganana an'i Ludwig Von Beethoven.
Lahatsary iray momba ity fampisehoana ity dia navoaka tao amin'ny media sosialy, izay nitarika ho amin'ny Bryce Dudal izay nasongadina tamin'ny fizarana iray an'ny Ellen DeGeneres Show. Ao amin'ny fanehoan-kevitra natao tamin'ny haino aman-jery sosialy momba ity fizarana DeGeneres ity, ny olona dia nanamarika fa tsy vitan'i Bryce Dudal fotsiny ny namoahan'i Beethoven tamim-pitiavana, dia nanamarika izy ireo fa manana fitoviana ara-batana i Bryce amin'i Ludvig Van Beethoven.
Ellen DeGeneres Manolotra kilalao iray ho an'i Bryce Dudal, izay manazava ny maha-pianista Concert Beethoven
Anisan'ny fampisehoana Ellen DeGeneres, i Bryce Dudal dia nanome ny piano Yamaha. Bryce dia nilaza tamin'i Ellen fa ny nofin-dry zareo dia ny hilalao piano, indrindra fa ireo hira nataon'i Ludwig Von Beethoven, ho an'ny mpihaino manerana izao tontolo izao.
Tao anatin'ny fivoriana iray niarahako tamin'i Kevin Ryerson, izay nanolotra mpitari-dalana iray antsoina hoe Ahtun Re izay naneho ny fahafaha-manao ny fiainana teo aloha, dia mifanaraka amin'ny fahamarinam-pahamarinana avo lenta, no nanamarina fa ny birao Dudal dia natsangan'i Ludwig Von Beethoven.
Gustavo Dudame, mpampihorohoro filoham-pihetsik'i Los Angeles, tahaka ny Fahatongavan'i Beethoven
Ny mahaliana dia nandefa fahatongavan'ny nofo vaovao ho any Beethoven taona lasa izay, izay ny mpitarika ny Orchestra Philharmonic Los Angeles, Gustavo Dudame, dia fantatra ihany koa ho toy ny vatana vaovao ao amin'i Beethoven. Ny sarin'ny Dudame amin'ny tuksedo dia omena ankavanana.
Ny endriky ny endriky ny Beethoven, Gustavo Dudame ary Bryce Dudal dia tsy miova. Kitiho ny sary mba hampitombo azy ireo.
Ny Firaisana ara-piraisana ara-pirahalahiana nohavaozina na ny fiainana andavanandro
Ireo tranga momba ny fanambadiana indray ao anatin'ny fanambadiana misy an'i Bryce sy Gustavo dia maneho ny fisian'ny Fibaribary ho an'ny Fahavetavetana, izay ahafahan'ny fanahy manandratra vatana roa amin'ny fotoana iray.
Ian Stevenson, MD ao amin'ny University of Virginia koa dia nanoratra tranga Split incarnation. Nantsoin'i Stevenson hoe "tranga misy daty anomaly" ireo, satria nifandona ara-potoana ny androm-piainany.
Ellen DeGeneres ho fampisehoana indray ilay Virtoalin'ny mpilalao sarimihetsika Virginia Vance
Ankoatr'izay, napetraka ny fiainan'i Ellen DeGeneres taloha. Mba hahafantarana bebe kokoa, azafady mankany:
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ny endriky ny endrik'i Ludwig Von Beethoven, Bryce Dudal ary Gustavo Dudame dia tsy miova. Ellen DeGeneres dia manana endrika mitovy endrika ihany koa amin'ny Virginia Vance. Kitiho ny sary mba hampitombo azy ireo.
Ny fiainan'ny talenta taloha sy ny zaridaina gino: Ny talenta mozikan'i Ludwig Von Beethoven dia miseho eo amin'ny fiainan'i Bryce Dudal sy Gustavo Dudame. Ny fahaiza-manaon'ireo viriosy Virginia Vance dia hita ao amin'ny asan'i Ellen DeGeneres.
Fiverenana ny fisandratana na fiverenana mivantana: Niorina indray ny anarana hoe Beethoven ao amin'ny Persiana avy amin'i Bryce Dudal sy Gustavo Dudame, izay tonga nofo tamin'ny fotoana mitovy.
Fiovàn'ny fiaraha-monina sy ny fiaraha-monina: Teraka tany Alemana i Beethoven, ary i Bryce Dudal kosa teraka tany Etazonia ary Gustavo Dudame kosa teraka tany Venezoela.